हामीले यो सरकारलाई कुनै महत्व दिएका छैनौं:डा. बाबुराम भट्टराई | नेपाल इटाली डट कम
हामीले यो सरकारलाई कुनै महत्व दिएका छैनौं:डा. बाबुराम भट्टराई
November 5, 2009 — nepalitaly
संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियामा त्यसै पनि ढिलाइ र अविश्वास पैदा भइरहेका बेला तपाईहरू आन्दोलनमा जानुभयो । यसले तपाईहरू गैरजिम्मेवार र मुलुकप्रति संवेदनहीन भएको प्रमाणित गरेन ?
राष्ट्रपतिले गत वैशाख २० गते मध्यरातमा कार्यकारी नागरिक सरकारको निर्णय उल्ट्याउन जुन असंवैधानिक कदम चाले त्यसले अन्तरिम संविधानमाथि खड्ग प्रहार गर्‍यो । त्यसले द्वैध सत्ताको स्थिति ल्यायो । हामीले त्यतिखेर अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक राजीनामा दियौं र मुलुकलाई भिडन्तबाट जोगायौं । र, त्यो विषयलाई संकल्प प्रस्तावका माध्यमबाट संविधानसभामा प्रवेश गराउन र त्यहीँबाट हल निकाल्न चाह्यौं । तर, संसदवादी पार्टीहरूले संविधानसभामा त्यो विषयलाई प्रवेश हुनै दिएनन् । त्यसैले हामी त्यो विषयको निरुपण गर्न अन्तिम अदालतका रूपमा जनताको अदालत अर्थात् सडकमा जान वाध्य भयौं । जहाँसम्म संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियामा ढिलाइ र अविश्वासको कुरा छ, हामी त्यसमा सबैभन्दा बढी चिन्तित छौं । यी दुवै कुरा (संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रिया) को सूत्राधार र अगुवा माओवादी हो । माओवादी पार्टीले बलिदानको पहाड खडा गरेर मुलुकलाई गणतन्त्र र संविधानसभासम्म ल्याएको हो । त्यसैले हामी संवेदनहीन र गैरजिम्मेवार बन्ने प्रश्नै उठ्दैन । वास्तवमा राष्ट्रपतिको वैशाख २० गतेको कदम नागरिक सर्वोच्चता, संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई बिथोल्ने, अन्तरिम संविधानलाई निष्प्रभावी बनाउने षड्यन्त्र थियो । हामी त्यो षड्यन्त्रलाई चिरेर, त्यसलाई सच्याएर संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई सही ढंगले अघि बढाउन र तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन अत्यन्त जिम्मेवारीबोधका साथ सडकमा आएका हौं । आन्दोलन हाम्रो संवेदनहीनता र गैरजिम्मेवारीबोध होइन बरु राष्ट्रप्रतिको गहन जिम्मेवारीबोध र संवेदनशीलताको उदाहरण हो ।
भन्न नागरिक सर्वोच्चता भने पनि र राष्ट्रपतिको कदमलाई निशाना बनाए पनि माओवादीको लक्ष्यचाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्नु नै हो नि, होइन ?
यो अत्यन्त गलत बुझाइ हो । सरकार नै हाम्रो लक्ष्य भए हामी किन राजीनामा दिन्थ्यौं ? हामी सरकारबाट हटेपछि बल्ल नागरिक सर्वोच्चताको कुरा आएको हो र ? हामी त सरकारमै थियौँ, कसैले अविश्वासको प्रस्तावसमेत ल्याएको थिएन । तर, राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चाले, त्यसको विरोध गर्न हामीले सरकारबाट राजीनामा दिएका हौँ । त्यसैले मुख्य विषय सरकार होइन, राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम हो । सेनालाई जननिर्वाचित सरकारको मातहतमा राख्ने संवैधानिक व्यवस्था र नागरिक सरकार कार्यकारी हुने भावना अकुण्ठितरूपमा स्थापित हुनुपर्छ । हाम्रो माग त्यही हो । त्यही माग राखेर हामीले सरकार छाडेका हौँ भने हामी फेरि यही अवस्थामा सरकारमा जाँदैमा त्यो हल हुन्छ भन्ने होइन । अहिले हाम्रो लक्ष्य सरकार हुँदै होइन, सरकारमा जाने एजेन्डा हुँदै होइन । राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्चिनुपर्छ, सेना नागरिक सरकारको मातहतमा हुने व्यवस्था हुनुपर्छ आन्दोलनको एजेन्डा त्यही हो । यसमा कोही कसैलाई भ्रम नहोस् ।
सरकारले वार्ताको आह्वान गरेको छ । माओवादीले किन त्यसलाई स्वीकार नगरेको ?
यो गलत प्रचारबाजी हो । सामान्यतः संघर्षका क्रममा संघर्ष र वार्ता सँगसँगै जान सक्छन् । एक-अर्काका पूरक पनि हुन सक्छन् । हामीले युद्धकालमा पनि वार्ता चलाएका थियौं । हामी त्यसलाई अन्यथा मान्दैनौं । तर, सरकारबाट आजका मितिसम्म सार्थक वार्ताको प्रस्ताव हामीसँग आएको छैन । त्यसैले अमूर्त ढंगको वार्ताको कुरा गर्नुभन्दा पनि ठोस एजेन्डामा छलफल हुने प्रस्ताव आउनुपर्छ । राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्चाउने, नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने, शान्ति र संविधान सुनिश्चित गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हाम्रा मुख्य मागबारे ठोस ढंगले केन्द्रीत भएर वार्ताको प्रस्ताव हामीसँग आएको छैन ।
आन्दोलनले नै निकास दिन्छ भन्ने तपाईहरूको निष्कर्ष हो ?
हामी आन्दोलन र संवादलाई साथसाथै लैजान चाहन्छौं । आन्दोलन हाम्रो रहर होइन वाध्यता हो । ६ महिनासम्म हामीले वार्ता र सहमतिबाट नै निकास निस्कियोस् भनेर प्रयत्न गर्‍यौँ । संविधानसभाले यो विषयको निरुपण गरोस् भनेर प्रयास गर्यौं । तर, यो कठपुतली सरकारका नायकहरूले संविधानसभाको बाटो छेके । जनतालाई अवमूल्यन गर्ने प्रयत्न गरिराखे । त्यसैले हामी बाध्य भएर संर्घषका कार्यक्रममा गएका हौं । ज-जसले अहिले हामीप्रति सन्देह व्यक्त गरिरहेका छन्, तीमध्ये कसैले हामीलाई आन्दोलनको विकल्प देखाइदिन सक्छन् ? संवेधानिक समाधानका सबै ढोका बन्द गरिएपछि मात्र हामी जनतामा गएका हौं ।
यो आन्दोलनले सरकारलाई राजीनामा दिन नै वाध्य बनायो भने पनि यसले सडकबाट सरकार बनाउने र ढाल्ने गलत नजिर स्थापित गर्दैन ?
कहाँबाट आयो, सरकारको कुरा ? कुन सरकार ? कस्तो सरकार ? राष्ट्रपतिले शाही शैलीमा संविधान मिचेर बनाइदिएको कठपुतली सरकार ? यो कुन विधिमा, कुन मर्यादामा, कुन लोकतान्त्रिक परम्परामा खडा छ र यो ढल्ने कुरा गर्नुभएको ? यो पहिल्यै ढलिरहेको, कहिल्यै खडा नै नभएको तथाकथित सरकार हो । माधव नेपालको सरकारको कुनै वैधानिकता नै छैन । यो राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको अवैध सन्तान मात्रै हो । त्यो कदम सच्चिँदा बित्तिकै यसलाई कसैले ढाल्नै पर्दैन । हामीले यो सरकारलाई कुनै महत्व दिएका छैनौं । हामीले यसलाई गणना नै गरेका छैनौं ।
सरकार आन्दोलनको प्रतिरोध गर्ने योजनामा छ । निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजिए गोलीसम्म चलाउने तयारीमा छ । सरकारका प्रवक्ताले आन्दोलन घोषणा गरेर शान्तिप्रक्रिया भंग गरेको टिप्पणी गरेका छन् । तपाईहरू मुलुकलाई फेरि भिडन्ततिर लैजाँदै हुनुहुन्छ, होइन ?
हाम्रो आन्दोलन कति शान्तिपूर्ण हुनेछ, सुरुकै दुई दिनमा प्रमाणित भइसकेको छ । आन्दोलनलाई हामीले जनउत्सवका रूपमा अघि बढाइरहेका छौं । पहिलो दिनदेखि नै हजारौं हजार जनताको उत्साहपूर्ण सहभागिताले हाम्रो आन्दोलन एउटा निर्णायक चरणमा पुग्दै छ भन्ने अनुभूति भएको छ । हामी वैधानिक ढंगले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छौं । मनोगत ढंगले जुन निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ, त्यो नै गलत छ । लोकतान्त्रिक परिपाटीमा जनताले शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारलाई निषेध गर्नु गलत हो । यसले निरंकुशताको झल्को दिन्छ । हामी त्यसको विरोध गर्छौं । फेरि पनि यो घेराउ कार्यक्रममा हामीले सुरक्षा संयन्त्रसँग मुठभेड गर्ने ढंगले गतिविधि गर्दैनौ । तर, सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई पनि हाम्रो अनुरोध छ- तपाइहरू अनावश्यक ढंगले हस्तक्षेप नगर्नोस्, कृपया जनतालाई उत्तेजित नतुल्याउनोस् । प्रदर्शन गर्ने जनताको अधिकार हो, हामी यो अधिकार प्रयोग गर्छौं । यसलाई मुठभेडमा लगेर तनाब बढाउनेलाई जनताले कारबाही गर्छन् । रह्यो, आन्दोलनले शान्तिप्रक्रिया भंग गरेको टिप्पणी । यो कुतर्क हो । हामी शान्तिप्रक्रियालाई छिटो अघि बढाउन र तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन दवाव दिनका लागि सडकमा छौं, शान्तिप्रक्रिया भंग गर्न होइन । यो शान्तिप्रक्रिया यहाँसम्म ल्याएको माओवादीले हो र यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने पनि माओवादीले नै हो । यसमा कसैलाई भ्रम नहुँदा हुन्छ ।
शान्तिपूर्ण भन्नुहन्छ तर निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुहुन्छ ।
पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य लेखराज भट्टलगायतका सभासद् कुटिइ पनि सकेका छन् । सरकारले आन्दोलनको कुनै प्रतिरोध नै गर्दैन भन्ने सोच्नुभएको हो ?
त्यो दुःखद् घटनाको हामी विरोध र भत्र्सना गछारै । शान्तिपूर्ण ढंगले धर्ना दिन गएका सभासद् र पूर्वमन्त्रीसमेत साथीहरूमाथि त्यो ढंगको हातपात हुनु असाध्यै निन्दनीय छ । अब त्यस्तो नहोस् भन्ने हामी आग्रह गर्दछौं । धेरैभन्दा धेरै जनता सहभागी गराउने र शान्तिपूर्ण ढंगले जनदबाब सिर्जना गर्ने हाम्रो आन्दोलनको प्रकृति हुन्छ । हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको उत्तेजना ल्याउने काम हुँदैन । सरकारका तर्फबाट आवश्यकताभन्दा बढी बलप्रयोग गर्ने काम गरियो भने त्यसको परिणाम उसैले भोग्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्छौ । हाम्रो आन्दोलन जनआन्दोलन हो । जनआन्दोलन भन्नेबित्तिकै त्यसको स्वरूप शान्तिपूर्ण हुन्छ । संवैधानिक घेराभित्र रहेर त्यो आन्दोलन सञ्चालन हुन्छ र हामी त्यसरी नै अगाडि बढ्छौं । कुनै पनि उत्तेजनामा नआईकन शान्तिपूर्ण ढंगले नै लक्ष्य प्राप्त गर्ने हाम्रो प्रयत्न हुन्छ । तर, शासकवर्गको चिन्तन जहिले पनि दमनद्वारा आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ भन्नेखालको हुन्छ । र, अहिलेका शासकहरूले पनि त्यही कुचेष्टा गरे भने जनता अलि आवेगमा आउने स्थिति त रहन्छ । तर, हाम्रा पार्टी-कार्यकर्ता अनुशासित छन् यी सबै परिस्थितिलाई हेर्दा अहिलेको आन्दोलन पार्टीले सोचेअनुरूप नै शान्तिपूर्ण ढंगले अगाडि जान्छ । र, लाखौं जनताका सहभागितामा यति ठूलो दबाब सिर्जना हुन्छ कि यो कठपुतली सरकार र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम त्यसका सामुन्ने टिक्न सक्दैनन् ।
तपाइंहरू स्वायत्त गणराज्यहरूको घोषणा गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । संविधानसभामा छलफल भइरहेको विषयमा तपाईहरूले एक्लै निर्णय गर्नु संविधासभाको अवमूल्यन होइन ? यसले तपाईहरू युद्धकालमा झैं समानान्तर सरकार गठनतिर अघि बढेको प्रमाणित गर्दैन ?
यो बुझाइ गलत हो । स्वायत्त गणराज्यहरूको घोषणा अहिलेलाई प्रचारात्मक र जनचेतनाका लागि हो । हामी अहिल्यै गणराज्यहरूको सीमांकन गर्दै छैनौं । नयाँ नेपाल निर्माणको महत्त्वपूर्ण मुद्दा भनेको राज्यको पुनर्संरचना पनि हो किनभने संविधानसभामार्फत पुरानो राज्यसत्तालाई अन्त्य गरेर नयाँ राज्य संरचना बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ । त्यसक्रममा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय विभेद अन्त्य हुनेगरी राज्यको पुनर्संरचना गर्ने नै संविधानसभाको मुख्य एजेन्डा हुन्छ । त्यसअन्तर्गत जुन उत्पीडित जातिहरू हुन्, उनीहरू आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय क्षेत्रीय स्वशासनका आधारमा स्वायत्त गणराज्य प्राप्त गर्ने अधिकार स्थापित गराउनु माओवादी आन्दोलनको एउटा प्रमुख एजेन्डा थियो र छ । हामीले जनयुद्धकालदेखि नै यही भन्दै आएका हौँ । अहिले पनि हाम्रो पार्टीले संविधानसभामा १३ वटा राज्यको प्रस्ताव गरेको छ, अहिले घोषणा गर्ने तिनै राज्य हुन् । तर, अहिले हामीले राज्य घोषणा गर्ने भनेको अहिले नै शासन चलाउने भनेको होइन । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको दबाबमा यथास्थितिवादी दलहरूले पनि संघीयता स्वीकार गरे । तर, जब त्यस्तो व्यवस्था गर्नेबेला आयो, अरू पछि हटेका छन् । हामीले संविधानसभामा आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गरिसक्यौँ । तर, अन्य दल अझै स्पष्ट छैनन् र जनताले गरेको वाचामा प्रतिबद्ध पनि छैनन् । सकेसम्म संघीयतामा नजाने र गए पनि स्वशासन दिएर होइन, विकेन्द्रीकरण शैलीका संघ बनाउने प्रयासमा छन् । फेरि पनि केन्द्रीकृत राज्य-प्रणाली लागू गरेर उपेक्षित जाति र क्षेत्रका जनतामाथि धोकाधडी गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । त्यसैले स्वायत्त गणराज्यको घोषणा गरेर हामी जनताका तर्फबाट खबरदारीको प्रयास सुरु गरेका छौँ । स्वायत्त राज्यहरूको माग आझेलमा नपरोस्, त्यस्तो षड्यन्त्र सफल नहोस् भनेर हामीले संघ घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय गरेका हौँ । अहिलेको यो घोषणा प्रतीकात्मक र प्रचारात्मक हो । यसले जनदबाब मात्र सिर्जना गर्छ । राज्य घोषणा गर्ने, सरकार बनाउने र राज्य चलाउने हाम्रो मनसाय होइन । तर, यो आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेर संघीय गणराज्यको मागलाई फेरि ओझेलमा राख्न खाजियो भने आन्दोलनको थप कार्यक्रम आउँछन्, हामी कडा हुनै पर्छ । यदि संविधानसभालाई प्रयोजनहीन बनाइन्छ, क्रान्तिका उपलव्धिलाई छलछामपूर्वक निष्प्रभावी बनाउन खोजिन्छ भने हामीसँग त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अर्को बाटो पनि छ भनेर हामी यथास्थितिवादीहरू र प्रतिक्रियावादीहरूलाई सन्देश दिन चाहन्छौं ।
सिंहदरबार घेराउमा कति कार्यकर्ता सडकमा उतार्नुहुन्छ ?
कम्तिमा अढाइ लाख, बढीमा सात-आठ लाख जनता उतार्छौं ।
यही चरणको आन्दोलनबाट तपाईका उद्देश्य पूरा होलान् ?
नत्र तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु हुन्छ ।
« भाइरल ज्वरोले पर्वतमा विरामीको संख्या दुई हजार नाघ्यो
शारीरिक सुगठनका उत्कृष्ट खेलाडी दुबईमा »